केटा मान्छे केटी बन्ने केटीले केटाको छ भन्ने ! लिङ्ग परिवर्तन साचो हो त डाक्टर ? माता सबिता (भिडियो)
सबिता सरु शर्मा आचार्य २०४५ सालमा धनकुटामा जन्मिनु भएको हो। उहालाई ७ वर्ष को उमेर देखि नै अलौकिक शक्तिको ज्ञात भएको हो। माताका वाणीहरु, मानिसले घमण्ड र रीष गर्न छाडौ ऑफै ऊन्नति र प्रगति हुन्छ, हरेक मानिसको जीवन जिउन साँच्चै काहां सजिल छ र? एक न एक तनाव ले सधै पछि लागेर पछ्याईरहन्छ।
कसैले बोलेर मात्र हुदैन काम गरेर पनि मन जित्न सक्नुपर्छ।, जो व्यक्ति आफनो रिसलाई आफनो टाउकोमा खन्याउन सक्षम हुन्छ,उसलाई अरुको रिसबाट बच्नुपर्दैन। ऋण र शत्रुलाई कहिल्यै पनि ठूलो हुन नदिनुस, प्रार्थना गर्ने ओठ भन्दा सेवा गर्ने हात अघि सार्नुस यो नै धर्म हो, मँन राम्रो भएपछी सबै कुरा राम्रो देखिन्छ ऑफ्नो ऑखाले, रिसाऊनु भनेको ऑफ्नै मनको शान्तिलाई भष्म पार्नु हो, कसैको बारे नकारात्मक सोच राखेर प्रत्यक्ष क्षण बिताऊनु भन्दा ऑफ्ना लागि सकारात्मक तरिकाले सोच्नु अमूल्य समयको सही सदुपयोग हो ।
आजको यस बिशेष अन्तरबार्तामा माता सबिता डाक्टर उमेश शर्मा संग आफुले सुन्दै आएको केही सुन्दा खेरि पनि अचम्म लाग्ने खालका जिज्ञासाहरु राख्नु भएको छ र आफ्नो स्वास्थ संबन्धित पनि माताले भक्तजन हरुलाई अहिले को टेस्ट रिपोर्ट हरु पनि सार्बजनिक गर्नु भएको छ । हामीले यस भिडियोलाइ तपाई हरु माझ शेयर गर्ने प्रयास गरेका छौ हेरौ उक्त भिडियोमा के कस्तो अरु रोचक कुराकानी पनि भयो त ।
बिहेमा दाइजो मागेको कुरा गलत हो, भाउजुले केटाको आइडी बनाएर अर्कै केटा सङ बोल्थिन भन्दै बहिनिहरु आए(भिडियो सहित)